NOOCYADA BEERISTA EE SPROUTS BRUSSELS, FAA'IIDOOYINKA SHARRAXAADDA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
In this article, waxaan ku bari doonaa sida loo aaso sprouts Brussels si sax ah.. Aan kuu sheegno waxa ciidda ay tahay iyo inta jeer ee aad u baahan tahay inaad waraabiso dhirta. Ma waxaad baran doontaa wax cusub oo kaliya, laakiin sidoo kale waxaad baraneysaa waxyaabo kooban oo xiiso leh oo ku saabsan cabbitaanka.
Ma taqaanaa? Karl Linney markii ugu horreysay ayaa lagu caleemo saaray Kaabashka, isaga oo ugu yeeray Brussels ka dib markii bannaanbaxayaal Belgian ah oo ka yimid Brussels. Beljamka, sprouts Brussels ayaa laga soo jaray meel kale.
Fiiri sprouts Brussels
Inta badan, beeritaanka haboon wuxuu u horseedi karaa ugu yaraan ugxan xun, iyo kiiskii ugu xumaa - geerida geedka. Sidaa darteed, waxaan ogaan doonaa goorta iyo sida loo abuuro sprouts Brussels.
Wixii miro abuuraa isku dar ah (soodhaw dhul + ciid oo leh isugeyn). Taas ka dib, 2 qaado oo ash alwaax ah iyo 1 qaado oo ah superphosphate ayaa lagu daraa isku dhafkan. Isku darka Earthen wuxuu ku buuxsamay sanduuqyada geedo iyo ku shubay daroogada "Chom" (15 g halkii 5 l oo biyo ah). Grooves waxaa laga sameeyey substrate leh qoto dheer oo ah 1 cm (masaafada u dhaxaysa jeexjeexyada waa 10 cm), ka dib markii taas oo miraha la dhigay, daboolay ciidda, iyo si khafiif ah cadaadiyey.
Heerkulka qolka leh sanduuqyada waa inuu ahaado 20 rodol. Iftiinkuna uma baahna inuu fiicnaado, laakiin waa inaanad sanduuqyada ku jirin miiska ama qolka hoose oo ay ku jiraan nalal la'aan. Toddobaadkii, caleemaha ayaa bilaabmaya. Muddadan, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo heerkulka inta lagu jiro maalinta + 6-8˚S, iyo habeenkii - ilaa + 9-12˚S.
Waa muhiim! Heerkulka waxaa la yareeyey ka dib markii biqilka si ay dhirtu u xoog badan yihiin, oo waxaa lagu beeray dhul furan.
Ka dib muuqaalka kore ee caleen ugu horeysay ee kaabash yar, waa la ridi karaa (transplanted) meel kale (sanduuq weyn ama koob). Sidoo kale waa muhiim in la ogaado marka marka la geeyo meel kale, kaabajka loo baahan yahay in lagu aaso dhulka dhulka cotyledon. Geedo u baahan tahay in lagu waraabiyo biyo heerkulka qolka + 18-20˚S. Waa muhiim in la bacrimiyo geedo. Tan waxaa lagu sameeyaa 2 marxaladood:
Kadib muuqaalka laba caleemo ee geedo yar yar, waxaa lagu quudin jiray xal nafaqo ah (nus nus oo kiniin ah oo ah 1 l oo biyo ah).
Muddada geedo adag oo adag. Waqtigaan, dharka sare waa isku dar ah 1 qaado oo ah HOL iyo potassium sulfate baaldi biyo ah (70-100 ml ayaa lagu shubaa geedka).
Ka hor inta aadan ku beeri goobta waxaad u baahan tahay inaad kaabajasho kaabajka. Si tan loo sameeyo, 15 maalmood ka hor qaliinka, sanduuqyada / koobabka geedo waa in si joogto ah loo sameeyaa qorraxda oo lagu diiriyaa heerkul hooseeya (waa muhiim in aan la dhaafin, marka laga reebo, geedka aan wali helin xoog).
Geedaha diyaar u ah in la beero dhul furan waa inay leeyihiin 5-6 go'yaal, dhumucdiisii ​​asliga ah waa 5 cm oo dhererkuna aanu ka yarayn 20 cm. Toddobaad ka hor intaan la beeriin, waraabinta ayaa si buuxda loo joojiyay (ma yeelayso waxyeelo geedka). Maalinta ka hor laga beerto ciidda furan, dhirta ayaa si badan u waraabisay, si ay dhulka ugu badan ee suurtogalka ah u xoqdo xididada.
Marka la beero sprouts Brussels, waa lagama maarmaan in la fuliyo tallaabooyinka diyaarinta. Seeds ka hor laga beerto waa in lagu duubo maro qoyan ilaa 4-5 maalmood. Ka dib markaa, miraha waxaa lagu qoynayaa 15 daqiiqo biyo diirran (50 ° C), kadibna qabow ilaa daqiiqad (samee tallaabooyinkaas si looga hortago cudurada suurtagalka ah). Marka xigta, miraha waxaa lagu qooyay xalka nitrophoska (1 tsp, 1 litir oo biyo ah) 15-16 saacadood.
Wixii ka horjeeda fiican ee dhaxan, miraha waxaa lagu kaydiyaa qaboojiyaha at -1 ° C. Ficiladani waa muhiim sababtoo ah waxay badbaadinayaan dhirta cudurada iyo cayayaanka, kordhiya caabbinta dhaxan.
Beeridda miraha waxaa lagu sameeyaa waqtiyo kala duwan, taas oo ku xiran kala duwan ee kaabajka. Noocyada hore waxay bilaabaan in la beero badhtamaha Maarso, dabayaaqadii - laga bilaabo Abriil 10. Geedo diyaarka ah ayaa lagu beeray dhul furan horraantii Juun.
Waxaad leedahay geedo of sprouts Brussels, hadda waa lagama maarmaan in si fiican u beeri on dhulka u furan. Si arrintan loo sameeyo, raac shuruucda cirbixinta.
Tan iyo dhirta ay u korodho cabbirka cajiibka ah, waxaad u baahan tahay inaad u qoondayso meel ku filan markaad beerto goobta. Baaxadda u dhaxaysa safarka waa in aysan ka yarayn 0.6 m. Safka, masaafada u dhaxeysa dhirta waa inay ahaataa ugu yaraan 40-50 cm. Meel qoto dheer oo beerto waa inay u dhigmaan dhererka xididdada geedo. Way ka fiican tahay inaad qariso asliga ah dhulka, wax yar ka badan, ka baxsan xididada dusha sare.
Ma taqaanaa? Boorashka Brussels waxaa lagula talinayaa sidii cunto shuban ah oo loogu talagalay dadka qaba cudurrada wadnaha.
Dhibaatooyinka sii kordhaya iyo daryeellaha sprouts Brussels
Waxaan tixgelinnay sida loo abuurayo sprouts Brussels on geedo, hadda u jeestaan ​​xeerarka daryeelka dhirta.
Ka hor inta beerto geedo ee dhulka u furan, waxaa haboon in la xusuusto in meeshan koray hore. Waxaa jira dhaqamo ka dib taas oo ay macquul tahay iyo xataa xitaa lagama maarmaan si loo abuuro sprouts Brussels. Laakiin waxaa jira kuwa ka dib taas oo aan macquul ahayn in la beero geedka.
Waa in aanad beeran sprouts Brussels kadib dalagyada soo socda: kaabajka cad ama midab kale, dabocase, dabocase, yaanyada, daboolka iyo dabocase. Haddii aad soo saaro sprouts Brussels kadib dalagyadaas, waxaad illoobi kartaa goosashada wanaagsan.
Waa muhiim! Ka dib markii kuwii ka horreeyay oo xun, meeshii lagu beeri lahaa sprouts Brussels waxay noqon doontaa mid aan ku habooneyn muddo 3 sano ah..
Haddii aad soo saarto sprouts Brussels ka dib marka la barbardhigo, sideratov, baradhada, basasha, qajaarka ama badarka, ka dibna quudinta dheeriga ah ma aha lagama maarmaan si looga dhigo ciidda. Dalagyadani waa kuwa ugu fiican ugxan-mareenada Brussels.
Waraabinta iyo dharka kaabajka
Tixgelinta Bacriminta for sprouts Brussels, waxaan ku bilaabi leh sharaxaad ka mid ah ciidda, taas oo ah mid ku habboon geedka. Xaqiiqdii, iyadoo ku xiran ciidda iyo qiyaasta bacriminta way ka duwanaan doontaa.
Dhaqankani ma dalbanayo substrate-ka, laakiin waxaa habboon in la qaato ciidda loamy ee bacrin ah oo "neefsanaya" si fiican. Carrabku waa inuu qoyan yahay, laakiin inta lagu jiro abaarta Kaabashka ma qalajo sababtoo ah qaabka nidaamka xididka. Haddii aad qorsheyneyso inaad ku beerato dhul cusub, ka dibna waxaa habboon in la sameeyo 4-5 kg ​​oo ah humus halkii mitir ee deganaansho, ama isticmaalka isku darka soo socda: Hure, superphosphate, chloride potassium iyo nitroammophos.
Waa muhiim! Bacriminta Kuwani waa qasab ah inay galaan ciidda aan ciriirin, haddii kale sprouts Brussels waxay siin doontaa goosashada saboolka ah oo ay jiran karaan.
Ka dib bacriminta, sariiraha waxaa la dredged iyo waraabiyo xal of potassium permanganate (1.5 g halkii 5 l oo biyo ah). Doorasho kale oo daaweyn ah waa daawada Fitosporin, oo loo isticmaalo 2 todobaad kahor.
Marka la eego, 10 maalmood ka dib markii la beero Kaabashka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu quudiyo Bacriminta nitrogen. (ha badin, haddii kale dhirku wuu dhimanayaa). Dhammaadkii Luulyo - Agoosto, dufcaddii labaad ee dharka sare - Bacriminta fosfate potassium waa in la adeegsadaa.
Waraabiyo sprouts Brussels waa inay dhexdhexaad ahaadaan. Xilliga cimilada kulul, waxaad ku shubi kartaa dhirta xoogaa xoogan, marka qoyaankaaga sare loo sii wadi karo. Ha si xad dhaaf ah ku shub Kaabashka, haddii kale waxaad la kulmi doonaa kallana root.
Hilling iyo dabacsan ciidda
Marka geedi socodka kobcinta, caleemaha Brussels waxaa lagu dhuftay dhowr jeer lakabka yar ee dhulka (waa in si taxadar leh loo sameeyaa si aanay u buuxin karin kaabajka hoose).
Waa muhiim! Si loo xoojiyo dhirta dhaadheer waxay sameeyaan dhirbaaxo, oo xidhxidhaan dhirta.
Sida kor ku xusan, dhirta ayaa jecel carrada, taas oo si fiican u dhaafaysa oksijiinka. Sidaa darteed, waxaa badanaa lagama maarmaan tahay in la dabciyo dhulka si ay xididada dhirta aysan ku dhicin.
Ilaalinta ka hortagga cayayaanka waa muhiim sida waraabinta iyo bacarimiso warshad. Maqnaanshaha daaweynta ama ka hortagga cudurka, ma helaysid dhalidda la rabay.
Boorashka Brussels waxaa saameeya isla cayayaanka sida kaabajka cad. Sidaa darteed, haddii sprouts Brussels iyo kaabajka cad ayaa lagu beeray on qaab, ka dibna prophylaxis waa in lagu fuliyaa labada noocyada.
Aan u leexano liiska sumeeyayaasha ee farageliya geedka.
1. Boodhka jilicsan
Kiniinnadani waxay sameeyaan shabaq caleemo kaabaj ah, iyagoo ku dhex jira godad badan.
Xalka soo socda ayaa kaa caawin doona inaad ka difaacdo iyaga: 1 tbsp. l 70% oo khal ah 10 litir oo biyo ah. Caqabado hal mar ah.
Qalabka bayoolaji ee boodada ayaa ah caleenta caleen, kaas oo lagu dhex beeray safafka.
2. Kaabashka duugo
Meelaha ku yaal qaabab aan caadi ahayn oo qaabaysan ayaa sameeya cayayaanka, dadka waaweyn oo aan waxyeello geedka geysan. Dhibku wuxuu sameeyaa dirxiga. Waxay dhigeen duullimaad dhulka ku dhow dhirta. Larvae wada baabbi'in dhirta dhalinyarada ee kala duwan hore.
La dagaallama cayayaanku waa ka wanaagsan yahay ka hor inta aan la garaacin kaabajka. Si tan loo sameeyo, waxaad ku rushaysaa ciidda agagaarka warshad leh isku dar ah (100 g oo qoryo qoryo ah, boodhkii tubaakada iyo 1 l oo ah basbaaska madow). Waxa kale oo loo isticmaalay xal sigaar ah (200 g oo tubaako ah halkii 10 litir oo biyo ah oo lagu daray 1 litir oo saabuun). Xalku waa la qaboojiyey, geddigoodana buufinayaa labada geedka laftiisa iyo ciidda u dhow.
Xakamaynta maaraynta aaladda waa mulching ee ciidda leh warqad wax lagu iibiyo, taas oo abuuri doona caqabad kale oo cayayaan ah.
3. Soo saarista roodhida iyo garka
Dufanada ukumo ku jirta ukunta dhinaca kale ee caleenka kaabash. Roobka cagaaran wuxuu gebi ahaanba cunayaa caleemaha iyo kaabajka.
Waa lagama maarmaan in la dagaallamo cayayaanka si deg deg ah, sidaa darteed warshadda ma engegi karto. Waxaad isticmaali kartaa xal qoryo qoryo ah (300 g oo ah ash iyo 1 qaado oo saabuunta dareeraha ah 10 litir oo biyo ah). Sidoo kale gaabis ah faafinta xayiraadaha dhoobada iyo dabacsanaanta ciidda.
Xulashada ugu fudud waa mesh ganaax ah, kaas oo daboolaya duurka. Sidaa darteed, balanbaalku si fudud uma awoodi doono in uu ukumo caleemaha.
Qof kastaa wuxuu yaqaan bukaan-jiifkan, maadaama ay saameyn ku dhowaad dhammaan dhirta beerta.
Si loola dagaallamo aphids waa sida soo socota: 150 g ash alwaax, 150 g tubaakada, 1 tbsp. l saabuunta dareeraha, 1 tbsp. l waa iniin khardal ah; Ku shub isku dar ah 2-3 litir oo biyo kulul ah (80-85˚S) kuna adkeyso maalin. Kadib markii xalka u faafay, waxaa ka buuxsamey 7 litir oo biyo ah oo la sifeeyo. Daaweynta waxaa la sameeyaa 3-4 maalmood oo kasta, ku buufinta aagga ay saameeyeen aphids. Sidoo kale dagaalka ka dhanka ah aphids, hababka kale ee caan ah ayaa sidoo kale ku habboon, kaas oo lagu dabaqi karaa sprouts Brussels.
5. Gooyooyinka iyo shinbiraha
Cayayaankaasi si fudud ayaa looga saari karaa farsamo, si kastaba ha ahaatee, haddii ay duurka si xun u saameysey, waxaad isticmaali kartaa hababka caansan ee cayayaanka. Si aad u burburiso sariiraha iyo slugs, waxaad u baahan tahay inaad isku diyaariso isku dar ah: 2 qaado oo ah basbaas dhulka ah, 2 qaado oo shaaraan, 2 qaado oo milix ah iyo 500 g oo qoryo qoryo ah. Maalinta qorraxda, rusheeyo ciidda hareeraha sprouts Brussels, isla markiina u dixi si qoto dheer ah 4-5 cm. Isla maalintaas, fiidka, waxaa la daaweeyaa mar labaad (500 g oo ah ash + 1 qaado oo ah basbaas dhulka ah). Isku dar waxaa lagu rusheeyaa jirka geedka.
Waxqabadka waxaa la sameeyaa inta u dhexeysa 4-5 maalmood.
Waxaan u jeednaa meesha ugu dambeysa, taas oo aan ku sharxeyno sida loo ururiyo loona kaydiyo sprouts Brussels.
Noocyada hore ee sprouts Brussels waa la goostay waqti, ka dib - 2-3aad. Marka la ururiyo madaxyada noocyo hore ah, hal usbuuc ka hor goosashada, waxay jeexayaan dhammaan caleemaha on baadiyaha (gooyaa baadiyaha saldhigga, ka dibna kaliya jeexaya sariiraha).
Laga soo bilaabo goosashada noocyo goor dambe waxay u dhacdaa si kala duwan. Caleemaha waxaa la gooyaa oo keliya dhinaca dhinacaas oo la ururin doono madaxa. Maadaama ay ururintu socoto dhowr marxaladood, waa wax aan macquul aheyn in laga gooyo caleemaha markasta.
Nadiifinta waxaa la sameeyaa Sebtembar iyo Oktoobar. Haddii cimiladu wanaagsan tahay, ka dibna kochanchiki si toos ah uga gooyay baadiyaha, haddii waddada ay jirto heerkulka diiran, ka dibna gooyaa duurka si buuxda. Ka dib taas, duurka u leh madaxyada kaabajka waxaa loo wareejiyaa qolalka qabow. Waxaad jarjar kartaa jaranjaro sida loogu baahdo 3 toddobaad. Heerkulka ugu fiican ee kaydinta kaabajka waa 0 ° C qoyaanka 95%. Xaaladahaas oo kale, kaabajka waxaa lagu keydin doonaa qiyaastii 2-2.5 bilood.
Si loo kordhiyo casriga ee kaabajka, waxaad baadho budada prikopat leh madaxyada ciid qoyan (oo leh duurka si ay uga saarto xididada) ee dhulka hoostiisa.
Faa'iidooyinka sprouts Brussels ee caafimaadka aadanaha
Sidaa daraadeed waxaan u guurey marxaladdii ugu dambaysay ee maqaalkani, kaas oo aad ku sheegi kartid tayadaadu waxay ka mahadcelinaysaa sprouts Brussels iyo sababta ay ugu haboon tahay in la cuno marar badan.
Faytiska Brussels waxaa ku jira walxo badan oo faa'iido leh, sida fitamiin B (B1, B2, B6, B9), fitamiin C (waxyaabaha ay ka kooban tahay dhowr jeer ka badan tan kaabashka caadiga ah), fitamiin PP iyo carotene. Kaabashka waxaa ku jira riboflavin sida ugu badan ee caanaha.
Iyada oo ay sabab u tahay ka kooban, sprouts Brussels waxay la socotaa daawo.
Waa muhiim! Casiirka sprouts Brussels ee walxaha badani waxay saameeyeen jidhka sida calool jilciye.
Cayayaanka sokorta ee Brussels waxay dib u soo celisaa beeryaraha. Sidoo kale aad ayay muhiim u tahay dadka qaba sonkorowga. Casiirku wuxuu leeyahay saameyn liddi ku ah, hematopoietic iyo saameynta anti-bararka.
Boorashka Brussels waxay kiciyaan bogsashada boogta waxayna leeyihiin saameyn tonic ah.
Waa muhiim! Boorashka Brussels laguma talinayo in la isticmaalo iyada oo la kordhiyey acidic ee caloosha.
Sidoo kale, caleemaha Brussels waxaa la cuni karaa kuwa raacaya kalooriyada ama doonaya in ay lumiyaan miisaanka. 100 g oo ah kaabajka waxa ku jira 35 kcal oo keliya. Sidaa darteed, 1 kg oo ah kaloori khudradda u dhiganta 100 g oo doofaarka.
Waxaannu kuu sheegnay wax ku saabsan beerista fuuqyada Brussels ee guriga, sharxay xeerarka dayactirka iyo nooca waraabka, baray geedo geedo iyo burburiyaan cayayaanka dhirta. Raac shuruucda kor ku xusan, oo aad awoodi karto inaad hesho goosan weyn.